शरिरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै नछोड्नु, – Krazy NepaL
शरिरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै नछोड्नु,
May 11, 2021 958
ज्योतिष शास्त्रको अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले धेरै कुरा संकेत गरिरहेको हुन्छ। शास्त्रमा कुन-कुन अंग ठूलो भएका महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन भन्ने विषयमा उल्लेख छ। शास्त्रअनुसार शरिरका यी अंग ठुला हुने महिला भाग्यमानि हुने र बिवाहका लागि राम्रो हुने मान्यता छ ।
तसर्थ पुरूषले यस्ता युवती जीवनसाथीको रूपमा स्विकार्न गर्न अर्थात नछोड्न् ज्योतिषहरू सुझाव दिने गर्छन्
दुईवटै हात लामो भएका महिलाहरुलाई जीवनमा ठूलो सुखशान्ती आराम मिल्नुको साथै असल जीवनसाथी मिल्ने गर्छ।
लामो कपाल भएका महिलाहरुले जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने र परिवारलाई सुखी र खुशी राख्न सक्छन।
लामो घाँटी भएका महिलाहरु मेहेनती र आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन। यी महिलाहरुलाई समाजमा निकै मान-प्रतिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्ने छ।
शरिरका दुई वटै कान ठूलो भएका महिलाहरु लामो आयुको हुने र निकै भाग्यमानी हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
लामो खुट्टा भएका महिलाहरु धेरै भाग्यमानी हुने र जीवनमा प्रशस्त धन लाभ गर्न सक्ने।
ठूलो वा गहिरो ना’ईटो भएका महिलाहरुले पनि जीवनमा अत्यधिक धन लाभ गर्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन ।
यो पनि पढ्नुहोसः कहिल्यै ‘क्षमा’ नमिल्ने जीवनका १२ पाप
सबै मानिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन् तर धर्म भनेको के हो र पाप भनेको के हो थाहा पाउदैनन् । शिव पुराणमा कार्य, व्यवहार र सोचद्धारा गरिएको १२ पापबारे वर्णित गरिएको छ, जसमा भगवान शिवले कहिल्ये क्ष’मा गर्न नसक्ने बताइएको छ ।
मन्दिरमा गएर निर्जीव मूर्तिलाई फूलपाती अक्षता भेटी चढाई ढोग दिनुलाई धर्म भन्छन् भने मन्दिरमा पूजा नगर्नुलाई पाप भन्छन् ।प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैले धेरै थोरै पाप गरेकै छन् । यस्ता व्यक्ति सँधै शिवको क्रो’धको शि’कार बन्ने र कहिल्यै जीवन सुखी हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
सोचेर गरिने पा’प
-अर्कोको पति वा पत्नीलाई नराम्रो नजर लगाउँनु वा उसलाई पाउँने इच्छा गर्नु पापको श्रेणीमा राखिएको छ ।
-अर्काको सम्पति आफ्नो बनाउँने चाहाना राख्नु ।
-राम्रो कुरालाई बिर्सेर नराम्रो बाटो पछ्याउँनु पनि पा’प हो ।
-कुनै सोझो–सादा व्यक्तिलाई क’ष्ट दिनु, उसलाई नोक्सान पुर्याउँनु वा धन–सम्पति लु’ट्ने आदि गर्नु कुनै पनि हालमा माफिको योग्य नहुने बताइन्छ ।
बोलीद्धारा गरिने पाप
-कुनै पनि ग’र्भवती महिलालाई नराम्रो बचन लगाउँनु वा आफ्नो कुराले उसको चित्त दखाउँनु पा’प मानिन्छ ।
-कसैको आत्मासम्मानलाई हानि पुर्याउँने नियतले झू’टो बोल्नु ‘छ’ल’को श्रेणीमा राखिएको छ ।
-समाजमा कसैको सम्मानमाथि हानि पुर्याउँने नियतले वा उसको पछिबाट कुरा काट्ने वा अफवाह फैलाउनु पनि क्ष’मा दिन नसकिने पा’प हो ।
-धर्मले नकारेको चीज खानु वा धर्म विपरित काम गर्नु कुनै पनि हालमा व्यक्तिका लागि स्वीकार्य हुँदैन।
-बच्चा तथा महिला वा अरु कोही पनि कमजोर जीवलाई हिं’सा र असामाजिक कार्यमा संलग्न मानिसलाई पा’पको भागिदार मानिन्छ ।
-ग’लत तरिकाले अर्कोको सम्पति ह’डप्नु, ब्राम्हण व मन्दिरको चीज चोर्नेलाई पनि पापको श्रेणीमा राखिएको छ ।
Prevछाला चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
Nextनङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ: पढ्नुहोस्
केवल ज्वरो मात्र होइन, यी ३ ल’क्षण देखियो भने पनि कोरोनाको हुन सक्छ, हेर्नुहोस्
सपनामा विहे गरेको देख्नु भयो ? दिन्छ यस्तो संकेत